Internet Ministries - Machechi aKristu ... Ndivanaani vanhu ava?
Ikereke dzaKristu ... Ndivanaani vanhu ava?
NaJoe R. Barnett
Iwe zvichida wakanzwa nezvekereke dzaKristu. Uye zvichida iwe wakabvunza, "Ndivanaani vanhu ava? Ko-kana chimwe chinhu-chinovaparadzanisa kubva kumazana emamwe machechi munyika?
Iwe ungangodaro wakashamisika kuti:
"Ndezvei zvakaitika kare?"
"Vane mitezo yei?"
"Vanotenda chii nezveBhaibheri?
Vangani Nhengo Dzakawanda?
Munyika yose pane dzimwe ungano dzeCNUMX dzekereke dzaKristu dzine 20,000 / 21 kusvika kune 2 mamiriyoni ega nhengo. Kune ungano shomanana, dzinoumbwa nenhengo shomanana - uye dzakakura dzakaumbwa nezviuru zvamazana nhengo.
Simba guru rekuverenga nhamba mumachechi aKristu riri kumaodzanyemba kweUnited States apo, somuenzaniso, pane dzimwe nhengo dze40,000 mune dzimwe ungano dze135 muNashville, Tennessee. Kana, kuDallas, Texas, uko kune mazana anenge 36,000 nhengo dzeungano 69. Mune dzimwe nyika dzakadai seTennessee, Texas, Oklahoma, Alabama, Kentucky - nevamwe - kune kereke yaKristu mumaguta ose, pasinei nokuti yakakura sei kana duku.
Kunyange zvazvo nhamba yeungano uye nhengo dzisinganyanyi mune dzimwe nzvimbo, kune machechi aKristu munharaunda dzose muUnited States uye mune dzimwe 109 dzimwe nyika.
Vanhu Vokudzorera Mudzimu
Nhengo dzekereke dzaKristu vanhu vekudzorera mweya - vachida kudzorera munguva yedu chechi yekare yeTestamente Itsva.
Dr. Hans Kung, nyanzvi yezvechitendero yeEurope, akabudisa bhuku makore mashomanana apfuura ane musoro weChechi. Dr. Kung vakachema chokwadi chokuti kereke yakagadzwa yakarashika nzira yayo; yave yakamanikidzwa netsika; rakakundikana kuva izvo Kristu akaronga zvinofanira kuva.
Mhinduro chete, maererano naKing Kung, ndeyekudzokera kumashoko ezvinyorwa kuti uone kuti chechi yaiva chii pakutanga kwayo, uye zvakare kuzopera muzana remakore rechimakumi chekutanga chechi chekutanga. Izvi ndizvo izvo machechi aKristu ari kutsvaga kuita.
Muchikamu chekupedzisira chezana remakore re18th, varume vemasangano akasiyana-siyana, vachidzidza vachizvimiririra kune mumwe nemumwe, munzvimbo dzakasiyana-siyana dzenyika, vakatanga kubvunza kuti:
-Neiko usingadzokeri shure kwemasangano ezvakanaka uye kuchena kwechechi yekutanga remakore?
-Nokuti usatora Bhaibheri roga uye zvakare ugare "wakasimba mukudzidzisa kwevaapositori ..." (Mabasa 2: 42)?
-Neiko usingadyari mbeu imwechete (Shoko raMwari, Ruka 8: 11), vaKristu ivavo vomuzana remakore rokutanga vakadyara, uye vave vaKristu chete, sezvavakanga vari?
Vakanga vachinyengeterera munhu wose kuti aparadze denominationalism, kurasa zvitendero zvevanhu, uye kutevera Bhaibheri chete.
Vakadzidzisa kuti hapana chinofanira kudiwa kune vanhu sezviito zvekutenda kunze kwezvo zviri pachena mumagwaro.
Vakasimbisa kuti kudzokera kuBhaibheki hazvirevi kuiswa kweimwe sangano, asi pane kudzokera kuchechi yekutanga.
Nhengo dzekereke dzaKristu dzinofarira nezve nzira iyi. NeBhaibheri semuongorori wega wega tinotsvaka kuwana izvo chechi yekutanga yakanga yakafanana nekudzorera nayo chaizvo.
Hationi izvi sekuzvikudza, asi izvo zvakasiyana. Tiri kuponesa kuti hatina kodzero yekukumbira kuvimbika kwevarume kune sangano revanhu-asi chete kodzero yekudana varume kuti vatevere hurongwa hwaMwari.
Nokuda kwechikonzero ichi, isu hatifariri zvitendwa zvakagadzirwa nevanhu, asi zviri muTestamente Itsva. Hatizivi kuti isu tiri sangano-kwete seChechi yeKaturike, maProtestant, kana maJuda - asi sevamwe nhengo dzechechi iyo Jesu akagadza uye yaakafira nayo.
Uye izvo, zvichiitika, ndicho chikonzero tine zita rake. Izwi rokuti "kereke yaKristu" harishandiswi sezita rechitendero, asi sezwi rinotsanangura rinoratidza kuti chechi ndeyeKristu.
Tinocherechedza kukanganisa kwedu pachedu uye kusimba-uye ichi ndicho chikonzero chikuru chekuda kunyatsotevedzera chirongwa chakakwana-chakakwana uye chakakwana Mwari ane chechi.
Kubatana Kubva paBhaibheri
Sezvo Mwari akapa "simba rose" muna Kristu (Mateo 28: 18), uye sezvo iye ari mushumiri waMwari nhasi (VaHeberu 1: 1,2), ndiko kutenda kwedu kuti Kristu chete ndiye ane simba rekutaura kuti chechi chii uye chii isu tinofanira kudzidzisa.
Uye sezvo Testamente Itsva ichinyora mirairo yaKristu kuvadzidzi vake, iyo chete inofanira kushanda sechikonzero chese dzidziso dzechitendero uye tsika. Izvi zvinokosha nemitezo yemachechi aKristu. Tinotenda kuti kudzidzisa Testamende Itsva pasina kuchinjwa ndiyo nzira chete yokutungamirira varume nevakadzi kuva vaKristu.
Tinotenda kupesana kwezvitendero kwakaipa. Jesu akanyengeterera kubatana (John 17). Uye gare gare, mupositora Pauro akakumbira avo vakanga vakakamurwa kuti vabatane munaKristu (1 Corinthians 1).
Tinotenda kuti chete nzira yekuwana kubatana ndeyokudzokera kuBhaibheri. Kukanganiswa hakugone kubatanidza. Uye zvechokwadi hapana munhu, kana boka revanhu, ane kodzero yekugadzira mitemo yemunhu wese inofanira kugara. Asi zvakakwana zvachose kutaura, "Ngatitanei nekutevera Bhaibheri chete." Izvi zvakanaka. Izvi zvakachengeteka. Izvi zvakanaka.
Saka machechi aKristu anoteterera kubatana kwechitendero kunobva muBhaibheri. Tinotenda kuti kubvuma kune chero chitendero kunze kweTestamente Itsva, kukaramba kuteerera chero mutemo weTestamente Itsva, kana kutevera chero chiito chisingatsigirwi neTesitamende Itsva kuwedzera kana kubvisa kubva kudzidziso dzaMwari. Uye zvose zvinyorwa uye kubviswa zvinotongwa muBhaibheri (VaGaratia 1: 6-9; Zvakazarurwa 22: 18,19).
Ichi ndicho chikonzero Testamente Itsva ndiyo chete mutemo wekutenda nemitoo yatinayo mumachechi aKristu.
Machechi aKristu haana chimwe chezviitiko zvemazuva ano masangano ehurumende. Hapana hurumende dzinodzora - kana dunhu, dunhu, nyika kana nyika-kwete padzimbahwe repasi uye pasina sangano rakagadzirwa nevanhu.
Ungano imwe neimwe inozvimirira (inotonga) uye inozvimiririra kune imwe neimwe ungano. Chimwe chete chisungo chinosunga ungano dzakawanda pamwe chete kuvimbika kunaKristu neBhaibheri.
Hakuna magungano, misangano yegore negore, kana mabhuku ehurumende. Ungano dzinoshanda pamwe chete pakutsigira dzimba dzevana, dzimba dzevakwegura, basa remishinari, zvakadaro. Zvisinei, kubatanidzwa kunongozvidira zvizere kune chikamu cheungano imwe neimwe uye hapana munhu kana boka rezvematongerwo emitemo kana kuita zvisarudzo kune dzimwe ungano.
Ungano imwe neimwe inotungamirirwa munzvimbo ino nevakawanda vevakuru vakasarudzwa kubva kune nhengo. Ava ndivo varume vanozadzisa zvakakodzera zvehofisi iyi yakapiwa mu1 Timothy 3 uye Titus 1.
Kunewo madhikoni muungano imwe neimwe. Idzi dzinofanirwa kuzadzikisa zvinyorwa zvebhaibheri zve 1 Timothy 3. I
Kunamata mumachechi aKristu kunzvimbo mune zvinhu zvishanu, zvakafanana nechechi yekutanga remakore. Tinotenda kuti muenzaniso unokosha. Jesu akati, "Mwari mweya, uye avo vanomunamata vanofanira kunamata mumweya nemuchokwadi" (John 4: 24). Kubva mumashoko aya tinodzidza zvinhu zvitatu:
1) Kunamata kwedu kunofanira kutungamirirwa kune chinhu chakanaka ... Mwari;
2) Inofanirwa kutungamirirwa nemweya wakarurama;
3) Inofanira kunge iri maererano nechokwadi.
Kunamata Mwari maererano nechokwadi ndiko kumunamata maererano neShoko rake, nokuti Shoko rake ichokwadi (Johane 17: 17). Nokudaro, hatifaniri kubvisa chero chinhu chinowanikwa muShoko rake, uye hatifaniri kuisa chero chinhu chisingawaniki muShoko rake.
Mune nyaya dzechitendero tinofanira kufamba nerutendo (2 Corinthians 5: 7). Sezvo rutendo rwunouya nekunzwa Shoko raMwari (VaRoma 10: 17), chipi nechipi chisingabvumirwi neBhaibheri hachikwanisi kuitwa nerutendo ... uye chipi zvacho chisiri chekutenda chivi (VaRoma 14: 23).
Zvinhu zvishanu zvekunamata zvakaratidzwa nechechi yekutanga remakore zvaiva kuimba, kunyengetera, kuparidza, kupa, uye kudya Kudya kwaShe Kwemanheru.
Kana iwe uchiziva makereke aKristu iwe unenge uchiziva kuti mune zviviri zvezvinhu izvi tsika yedu yakasiyana neyedzimwe mapoka emachechi. Saka ndibvumirei kufunga nezvezviviri izvi, uye taura zvikonzero zvedu zvezvatinoita.
Chimwe chezvinhu izvo vanhu vanonyanya kuona pamusoro pekereke yaKristu ndeyekuti tinoimba kunze kwekushandiswa kwemichina yekuimba yemimhanzi -kuimba kwepopella ndiyo chete mimhanzi inoshandiswa pakunamata kwedu.
Zvakarehwa, heino chikonzero: tiri kutsvaga kunamatira maererano nemirairo yeTestamente Itsva. Testamente Itsva inobva mumimhanzi inobatanidza, saka, tinozvitenda zvakanaka uye zvakachengeteka kuti tisiye, zvakare. Kana tikashandisa chigadzirwa chemagetsi taifanira kuita kudaro tisina simba reTestamente Itsva.
Pane mitsara ye8 chete muTestamente Itsva panyaya yemimhanzi pakunamata. Pano ivo ndevaya:
"Zvino vakati vaimba rwiyo, vakabuda vakaenda kuGomo reMiorivhi" (Mateo 26: 30).
"panenge pakati pousiku Pauro naSirasi vakanga vachinyengetera uye vachiimba nziyo kuna Mwari ..." (Mabasa 16: 25).
"Naizvozvo ndichakurumbidzai pakati pevahedheni, uye ndichaimbira zita renyu" (VaRoma 15: 9).
"Ndichaimba nemweya uye ini ndichaimba nepfungwa" (1 Corinthians 14: 15).
"Kuzadzwa noMweya, kutaurirana nemapisarema uye nenziyo nenziyo dzeMweya, kuimba nekuimbira Ishe nemwoyo wako wose" (VaEfeso 5: 18,19).
"Shoko raKristu ngarigare mamuri nekufuma, sezvamunodzidzisa nekurudzirana muuchenjeri hwose, uye sezvamuri kuimba nziyo nemimhanzi nenziyo dzemweya nekuvonga mumoyo yenyu kuna Mwari" (VaKorose 3: 16).
"Ndichazivisa zita renyu kuhama dzangu, pakati pekereke ndichaimba rumbidzo kwamuri" (VaHebheru 2: 12).
"Pane mumwe wenyu anotambudzika here?" Iye ngaainyengetere. "Kune mumwe anofara here?" Ngaaimbe nziyo "(James 5: 13).
Chimbo chemagetsi chemimhanzi chiri pachena kusipo mune zvinyorwa izvi.
Nhoroondo yekutanga, kuonekwa kwekutanga kwemimhanzi inobatsira pakunamatira kwechechi kwakanga kusiri kusvika muzana remakore rechitanhatu AD, uye pakanga pasina chekuita maitiro avo kusvikira mushure mezana remakore rechisere.
Mimhanzi yepayenzi yakarwiswa zvikuru nevatungamiriri vezvitendero vakadai saJohn Calvin, John Wesley naCharles Spurgeon nekuda kwekusipo kweTestamente Itsva.
Kuchengeta kwevhiki nevhiki kweKudya kwaShe Kwemanheru
Imwe nzvimbo umo iwe ungave wakacherechedza musiyano pakati pemakereke aKristu uye mamwe mapoka ezvitendero ari muKudya kwaShe Kwemanheru. Ichi chirairo chechirangaridzo chakavhurwa naJesu pausiku hwaakatengesa (Mateo 26: 26-28). Inoratidzwa nevaKristu mukuyeuka kufa kwaShe (1 Korinte 11: 24,25). Zviratidzo - chingwa chisina kuviriswa uye michero yemuzambiringa - inofananidzira muviri neropa raJesu (1 Corinthians 10: 16).
Machechi aKristu akasiyana nevamwe vazhinji pakuti tinocherechedza Kudya kwaShe Kwemanheru pazuva rokutanga revhiki rese. Zvakare, chikonzero chedu chinowanikwa mukutsunga kwedu kutevera dzidziso yeTestamente Itsva. Iyo inoti, kutsanangura tsika yekereke yekutanga yekutanga, "Uye pazuva rokutanga revhiki ... vadzidzi vakaungana kuti vadye chingwa ..." (Mabasa 20: 7).
Vamwe vakaramba kuti zvinyorwa hazvirevi zuva rokutanga revhiki rese. Izvi ndezvokwadi - sokuti murairo wekuchengeta Sabata hauna kureva Sabata rese. Uyu murairo waiva nyore, "yeuka zuva reSabata kuti richengete rive dzvene" (Eksodho 20: 8). VaJudha vainzwisisa kuti zvinoreva Sabata rimwe nerimwe. Zvinoratidzika kwatiri kuti nemafungiro akafanana "zuva rokutanga revhiki" rinoreva zuva rokutanga revhiki rese.
Zvakare, tinoziva kubva kuvanyori venhau dzakaremekedzwa seNeander naEusebius kuti maKristu emakore mazana epakutanga akatora Ishe Yezvokudya zveSvondo Svondo rese.
Pamwe iwe uri kushamisika, "Munhu anova sei nhengo yekereke yaKristu?" Ndezvipi zvinoreva uhu?
Machechi aKristu haatauri nezvehutano maererano nemamwe mazano ayo anofanira kuteverwa kuti agamuchirwe muchechi. Testamente Itsva inopa dzimwe nhanho dzakatorwa nevanhu muzuva iroro kuva vaKristu. Apo munhu akava muKristu iye pachake aive nhengo yechechi.
Ndizvo zvakafanana nemachechi aKristu nhasi. Hakuchina sarudzo yakasiyana yemitambo kana mhemberero iyo inofanira kutevera kuti iendeswe muchechi. Apo mumwe anova muKristu iye, panguva imwechete, anova nhengo yechechi. Hapanazve mamwe matanho anodiwa kuti akwanise kuve nhengo yechechi.
Pazuva rokutanga kereke iripo avo avo vakapfidza uye vakabhabhatidzwa vakaponeswa (Mabasa 2: 38). Uye kubva pazuva iro mberi vose avo vakaponeswa vakawedzerwa kukereke (Mabasa 2: 47). Maererano nendima iyi (Mabhuku 2: 47) ndiye Mwari uyo akawedzera. Saka, mukutsvaga kutevera muenzaniso uyu, hatina kuvhota vanhu muchechi kana kuvamanikidza kuburikidza nedzimwe tsvakurudzo dzezvidzidzo. Hatina kodzero yekuda chimwe chinhu kunze kwekuteerera kwavo kuteerera kuMuponesi.
Mamiriro ezvinhu okuregerera anodzidziswa muTesitamende Itsva ndeaya:
1) Mumwe anofanira kunzwa evhangeri, nokuti "kutenda kunouya nekunzwa shoko raMwari" (VaRoma 10: 17).
2) Munhu anofanira kutenda, nokuti "pasina rutendo hazvibviri kufadza Mwari" (VaHebheru 11: 6).
3) Mumwe munhu anofanira kupfidza zvitadzo zvekare, nokuti Mwari "anorayira vanhu vose, pose-pose kuti vatendeuke" (Mabasa 17: 30).
4) Mumwe anofanira kubvuma Jesu saIshe, nokuti akati, "Uyo anondibvuma pamberi pevanhu, iye neniwo ndichamupupura pamberi pababa vangu vari kumatenga" (Mateo 10: 32).
5) Uye munhu anofanira kubhabhatidzwa nokuda kwekukangamwirwa kwezvivi, nokuti Petro akati, "Tendeukai, uye mubhabhatidzwe mumwe nomumwe wenyu nezita raJesu Kristu kuitira kuregererwa kwezvivi zvenyu ..." (Mabasa 2: 38) .
Machechi aKristu ane mukurumbira wekuisa pfungwa dzakawanda pamusoro pekudiwa kwekubhabhatidzwa. Zvisinei, hatisi kusimbisa rubhabhatidzo se "mutemo wechechi," asi semurairo waKristu. Testamente Itsva inodzidzisa kubhabhatidzwa sechiito chinokosha pakuponeswa (Mako 16: 16; Mabasa 2: 38; Mabasa 22: 16).
Hatisi kurwisa kubhabhatidzwa nokuti kubhabhatidzwa kweTestamente Itsva ndeyevatadzi avo vanotendeukira kuna Ishe mukutenda uye kutendeuka. Mucheche haana chitadzo chokupfidza, uye haagoni kukodzera kuva mutendi.
Iyo chete yebhapatidzo yatinoita mumachechi aKristu ndiko kubhabhatidza. Izwi rechiGiriki iro shoko rinobhabhatidza rinouya rinoreva "kuvhara, kubhabhatidza, kubatanidza, kutamba." Uye Magwaro anogara achitaura nezvebhapatidzo sekuvigwa (Mabasa 8: 35-39; VaRoma 6: 3,4; Vakolose 2: 12).
Kubhabhatidzwa kunonyanya kukosha nokuti Testamente Itsva inotaura zvinotevera:
1) Ndiko kupinda muumambo (John 3: 5).
2) Ndiko kusangana neropa raKristu (VaRoma 6: 3,4).
3) Ndiko kupinda munaKristu (VaGaratiya 3: 27).
4) Ndirwo ruponeso (Mako 16: 16; 1 Peter 3: 21).
5) Ndiyo yekuregererwa kwezvivi (Mabasa 2: 38).
6) Ndiko kushambidza zvitadzo (Mabasa 22: 16).
7) Ndiko kupinda muchechi (1 VAKORINDE 12: 13; VaEfeso 1: 23).
Sezvo Kristu akafira zvitadzo zvenyika yose uye kukokwa kugoverana munyasha dzake dzinoponesa kune vanhu vose (Mabasa 10: 34,35; Zvakazarurwa 22: 17), hatitendi kuti kune munhu akafanorongerwa kuti aponeswe kana kutongerwa. Vamwe vachasarudza kuuya kuna Kristu mukutenda nekuteerera uye vachaponeswa. Vamwe vacharamba chikumbiro chake uye vachapiwa mhosva (Mako 16: 16). Izvi hazvisi kurasikirwa nokuti zvakange zvichengeterwa mhosva, asi nokuti ndiyo nzira yavakasarudza.
Kwese kwauri iwe panguva ino, tinotarisira kuti uchasarudza kugamuchira ruponeso rwakapiwa naKristu-kuti iwe uchazvipa iwe mukutenda kunoteerera uye ugova nhengo yechechi yake.